Sinoa: May ny CCTV · Global Voices teny Malagasy
Nivoaka ny 20 Febroary 2009 19:28 GMT
Ny alin’ny 9 Febroary, tratran’ny afo ny ampahan’ny tilikambon’ny Ivo-toerana Televiziona Sinoa (China Central Television (CCTV)) rehefa nandrehatra afomanga entina hankalazana ny fankalazana ny fetin’ny arendrina ny vaomiera mpikarakara. Nahafatesana mpamono afo iray ny hain-trano araka ny tatitra, nandratrana olona fito, nandravana fitaovam-pampielezam-peo mitentina lavitr’isa Yuan maromaro (milliards).
Nahatsikaritra ny mpitazana fa milazalaza mikasika ny CCTV may ny aterineto netizen Sinoa. Kanefa ny zava-nitranga, raha vao nanomboka nanivana ireo loharanom-baovao misongadina ao amin’ny Chinese cyberspace ny fitondram-panjakana , dia nampiasaina ny fomba hanatanterahana ny fifandraisana vonji-maika mba hampielezana ny feon’ny vahoaka.
Nahavoaray hafatra SMS avy amin’ny iray amin’ireo namako akaiky aho tamin’ny 10 Febroary, izay milaza venti-kevitra roa miresaka ny fomba amam-panao Sinoa afaka jerena amin'ny aterineto.
Andalana voalohany: Nampalaza an’I Xiao Shenyang ny rindra-kira nankalazana ny fetin’ny lohataona
Andalana faharoa: Nandoro ny trano avo be miendrika kiraro ny afomanga fankalazana ny fetin’ny arendrina.
Andalana mitsivalana: Tsy ho ritra mihintsy aloha ny volan’I CCTV e.
Toy izay no fehin’ilay hafatra:
Amin’ny maha-olombelona, tsy hiverina intsony anie izany ho an’ny CCTV. Raha tsy hoe angaha, teraka ho voaheloka ianao eny fa na dia tsara vintana mbola velona tao anatin’ny taom-baovao sinoa.
Nahavoaray mailaka avy tamin’ny Mr. Yue aho ny 12 Febroary, izay nitondra karazana tsikera sy sarina donak’afo avy amina karazan’olona maro. Ny iray amin’ireo tatitrany dia mivaky hoe:
Manankarena loatra kosa angaha I CCTV no dia manaiky ity tranobe ho may mba entina hankalazana ny fetin’ny arendrina raha toa ka tsy matakatra afatsy ireo tsipoapoaka ireo olon-kafa.
Mitsikera mahakasika ny tsy fahaiza-manaon’I CCTV ny netizen hafa .
Nanome toro-marika anay ny tamba-zotram-baovao Sinoa mba ho marin-toetra sy ho mpanara-dalana, kanefa ianareo izao no hita mibaribary fa mandika ny lalana. Mahatsapa ny manjavozavo izahay ankehitriny!
Ivelan’ny vinavinako, mpitsikera iray no manana fomba fijeriny feno fanantenana mikasika ny vokatry ny afo:
Hikitika hanetsika ny tinady sy hanosika ny fitombony Vokatra Anaty (P.I.B : Produit Interieur Brut) io faharavana sy fanamboarana ny tranobe CCTV io amin’izao fotoana izao. Etsy andanin’izany, hamorona asa antselika ho an’ny mpila ravin’ahitra io toe-javatra io. Ireo voatonona amin’izany dia hitondra ny amboara lehibe.
Olona iray kosa no tsy afapo tamin’ny herin’ny fahaiza-manaon’ny CCTV
Ara-potoana sady misy fitohizana ny tatitra nentin’ny CCTV mikasika ny rehitr’afon’ny 11 Septambara tany Etazonia, kanefa ny tatitra mahakasika ny afo nidonaka tao aminy dia nataony fohy kely sady miolakolaka. Fa fanahy inona ary ity? Fanahy manandaza mampiseho ny “tsy fitiavan-tena mba hanadiovan-tena”
Mba hisintonana lesona avy amin’ity afo dia mitaky izany ara-politika ny sasany:
Iangaviana mba aoka hanatelina ny fanafody misy ny marika demokrasia raha toa ka ampijalian’ny molotra mivonto ny mpitondra teny.
Matahotra aho fa ny teny miolana entin ’ireo vahoaka Sinoa dia ho voadika vilana ho hafaliana, tsisy indrafo na fanambaniana. Ny zava-misy dia ny famazivaziana voalaza etsy ambony no maneho an-tsary ireo olan’ny vahoaka mahakasika ny zava-nitranga, ny alahelon’izy ireo ho an’ireo maty sy ireo naratra, ny hatezeran’izy ireo amin’ny CCTV, ary ny fitiavan’izy ireo ny tanininy.